ट्वीटरमा आउँदैछ गज्जबको फिचर, अब आफूले गरेका ट्वीट ‘इडिट’ गर्न सकिने – Chautari Khabar
होमपेज / chautari tv / ट्वीटरमा आउँदैछ गज्जबको फिचर, अब आफूले गरेका ट्वीट ‘इडिट’ गर्न सकिने
शुक्रबार, फागुन ०३, २०७५
ट्वीटेहरुका लागि ट्वीटर प्रयोग गरिरहँदा सधै खट्किरहने एउटा विषय हो आफूले गरेको ट्वीट सच्याउन नसकिनु । आफूले गरेको ट्वीटमा अक्षरहरु वा कुनै अन्य गल्ती फेला परेमा त्यसलाई सम्पादन गरेर सच्याउने विकल्प हुँदैन । कि त भएको गल्तीको प्रष्टीकरणमा अर्को ट्वीट गर्ने वा गल्ती भएको ट्वीटलाई डिलिट गर्ने ।
तर अबचाहिँ ट्वीटरमा पनि फेसबुकमा झैँ आफूले गरेको पोष्ट इडिट गर्ने फिचर आउने भएको छ । योसँगै अब ट्वीटर प्रयोगकर्ताले आफ्नो ट्वीटमा भएको गल्ती सुधार्ने मौका पाउनेछन् ।
ट्वीटरले यस्तो फिचर निकट भविष्यमै ल्याउनेछ । तर फेसबुकमा गरिने जस्तो इडिट ट्वीटरमा हुनेछैन । किनकि कुनै पनि ट्वीटलाई सम्पादन गरेर पब्लिस गरिसकेपछि पनि त्यो ट्वीटको ओरिजिनल भर्सनसमेत हेर्न सकिनेछ । अर्थात् खासमा सुरुमा उक्त ट्वीटमा के थियो र पछि के सम्पादन गरिएको हो ? भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिनेछ ।
नाइन टू फाइभ म्याक नामक वेबसाइटले ट्वीटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याक डोर्सीको अन्तरवार्ता उद्धृत गर्दै यस्तो दाबी गरेको छ । उसका अनुसार ट्वीटरले ट्वीट सेन्ड गर्दा ५ देखि ३० सेकेण्डसम्मको अवधि दिने फिचर ल्याउनेछ । सोही विन्डोमा प्रयोगकर्ताले उक्त ट्वीटलाई इडिट गर्न सक्नेछन् ।
ट्वीटरले अहिलेसम्म पनि ट्वीट इडिट गर्न सकिने फिचर किन नल्याएको भन्ने प्रश्नमा डोर्सीले भनेका छन्, ‘ट्वीटरको प्लाटफर्म टेक्स्ट मेसेजिंग एपको एसएमएस फम्र्याटमा बनेको छ । जब तपाईं टेक्स्ट मेसेज गर्नुहुन्छ, तब तपाईंले त्यसलाई फिर्ता लिने भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैगरी जब तपाईं ट्वीट गर्नुहुन्छ, तब यो तुरुन्तै दुनियामा फैलिन्छ । अनि तपाईंले त्यसलाई फिर्ता लिन सक्नुहुन्न ।’
ट्वीटर प्रयोगकर्ताको सुझावको आधारमा डोर्सीले ट्वीट संशोधन गर्ने फिचरका बारेमा पहिलोपटक सन् २०१६ मा चर्चा गरेका थिए । उनले ट्वीटरमा कुन चिजमा सुधार होस् वा के नयाँ कुरा थपियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? भनेर प्रयोगकर्तालाई प्रश्न सोधेका थिए । त्यसको जवाफमा लाखौं ट्वीटर प्रयोगकर्ताले ट्वीट इडिट गर्ने फिचर थप गर्न आग्रह गरेका थिए ।